अमेरिकी डलरको भाउ उच्च विन्दुमा, नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा ? « Aarthik Sanjal अमेरिकी डलरको भाउ उच्च विन्दुमा, नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा ? – Aarthik Sanjal
अमेरिकी डलरको भाउ उच्च विन्दुमा, नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा ?
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १७:११
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एक अमेरिकी डलरको खरिद दर ११७ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३२ पैसा निर्धारण गरेको छ । यो भाउ हो । तथापि, यसअघि सन् २०१८ को अक्टोबर १० मा डलरको भाउ ११८ रुपैयाँ ७३ पैसा पुगेको थियो । अहिले फेरि त्यसबेलाकै उच्च विन्दु नजिक भाउ पुगिसकेको छ ।
चीनबाट फैलिन सुरु गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर देखिएको छ । कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन थालेको अवस्था छ । सोही कारण लगानीकर्ताहरु अमेरिकी डलर सञ्चय गर्न तर्फ लागेको अनुमान छ । पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना त्रासका कारण विशेष गरी अमेरिकी डलर र सुन बजार तर्फ लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका छन् । सोही कारण सुनको भाउले पनि दिनहँुजसो नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । माग बढेसँगै मूल्य पनि उच्च भएको हो ।
डलरको भाउ बढ्दा पर्यटन व्यवसायमा फाइदा पुग्छ । तर यतिबेला पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना त्रासका कारण शिथिल हुन थालेको छ । यसबाट नेपालले अहिले खासै फाइदा लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै, डलर महँगिदा निर्यात व्यापारबाट लाभ लिन सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिटेन्स पठाउँदा यहाँ लाभ लिन सकिन्छ । तर विदेश अध्ययन गर्न जान विद्यार्थी, औषधि उपचार गर्न जानेले बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, आयातित वस्तुको भाउ बढ्न जान्छ । पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तु आयातमा नेपालले धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । डलरको भाउ चुलिंदा समग्रमा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा बढी हुने अवस्था रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । तर निर्यात धेरै र रेमिटेन्स आय बढाउन सके लाभ लिन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कोरोनका कारण पर्यटन व्यवसाय असर नगरेको भए पर्यटनबाट पनि बेस्सरी लाभ लिन सकिने थियो ।
यस्तै, युरो १ को खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी पाउण्डको खरिददर १५३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ ।यसैगरी, मलेसियन रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ । यता, कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । युएई दिरामको खरिद दर ३२ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ २१ पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।